चोरी गर्ने काइदा : १० वर्षको अवधिमा ८ जनासँग विहे, प्रत्येक घरबाट गहना र नगद चोरी !
नेपाल चोरी गर्ने काइदा : १० वर्षको अवधिमा ८ जनासँग विहे, प्रत्येक घरबाट गहना र नगद चोरी !
Nepal Online Patrika| Kathmandu: चोरी गर्नकै लागि एक महिलाले १० वर्षको अवधिमा ८ जनासँग विवाह गरेकी छिन् ।
१० वर्षको अवधिमा ८ जना वृद्धसँग विवाह गरेर गहना तथा नगद चोर्ने गरेको ती महिलालाई आरोप लागेको छ ।
यो घटना भारतको हो । यूपी प्रहरीले ती ‘लुटेर दुलही’लाई पक्राउ गरी उनीविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेको छ ।
यूपीको गाजियाबाद पुलिसले मुद्धा दर्ता गरेको ती महिलाको नाम मोनिका मलिक भएको बताएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले बताएको छ ।
ती महिलाले पछिल्लो समय एक ६६ वर्षीय कन्स्ट्रक्सन कन्ट्रेक्टरलाई आफ्नो निशाना बनाएकी थिइन् । ती महिलाले उनको १५ लाख नगद र अन्य सामान लिएर फरार भएकी थिइन् ।
६६ वर्षीय ती पुरुषको नाम जुगल किशोर हो । उनी ती महिलाको ८ औं पति भएको एजेन्सीले बताएको छ ।
आफ्नो नगद चोरी भएपछि किशोरले प्रहरीलाई उजुरी गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान गर्दा उनको ८ पति रहेको खुलेको हो ।
जुगल गाउँपालिकाका बालकलाई चौताराका युवाहरुको सहयोग:
चौतारा : हड्डी रोगबाट ग्रसित जुगल गाउँपालिका २ सञ्चगाउँका १५ वर्षिय सुब्बा गोलेको उपचारका लागि चौताराका युवाहरुले नगद सहयोग गरेका छन्। आर्थिक अभावकै कारण उपचार गराउन राजधानी जान नसकेका उनलाई युवाहरुबाट संकलित ८२ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ सहयोग गरिएको हो।
उनी अहिले चौतारा अस्पतालमा उपचारारार्थ छन्। अस्पतालमै पुगेर युवाहरुले उनका दाजु र उनलाई रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। आर्थिक अभावकै कारण उपचार गराउन समस्या परेको उनका बुबा श्यामबहादुर गोलेले बताए।
चिकित्सकका अनुसार उनको उपचारमा कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँ लाग्छ। उनको तिघ्राको हड्डीमा समस्या आएको हो। त्यसमा स्टिल राख्नुपर्ने अस्पतालले जनाएको छ।